लघु कथा : कस्तुरीले बिना खोज्दै | NepalDut
लघु कथा : कस्तुरीले बिना खोज्दै
शिवप्रसाद पाण्डे, काठमाडौं
भ्रमण वर्षमा धेरै पर्यटक गाउँमा भित्राउने लक्ष्य थियो । अध्यक्ष पर्यटकको खोजिमा काठमाण्डौ गएका थिए ।
गाउँमा हेर्न लायक धेरै कुराहरु थिए, लामो गुफा, झरना, गिध्द नुहाउने ढुङ्गाको कुण्ड, आफ्नै मौलिक संस्कृति, परंपरा गीत नाच आदि ।
गाउँ प्रवेश गर्ने मूल बाटोदेखि केही माथि ठूलो वोर्ड टाँगिएको थियो । त्यस वोर्डमा सचित्र “खूला दिसा मुक्त गाउँ ” भनि लेखिएको थियो । अध्यक्षले भने अनुसार गाउँलेहरुले पाहुनाहरुलाई स्वागत गर्न परिपाटी मिलाएका थिए ।
पर्यटक धनी हुन्छन् भन्ने मान्यता राखि गाउँलेको दलिद्रता देखाई सहयोग माग्ने योजना थियो । प्रतिनिधिहरुले खोजेर भए पनि कोट र टोपी लगाएका थिए । कसैले कोट र चप्पल लगाएका थिए भने कसैले कोट लगाई तल हाप पाइन्ट पनि लगाएका थिए ।
वालवालिकाहरुले पुराना च्यातिएका कपडा भने बमोजिम लगाएका थिए ।स्वागतार्थ खटिएका पन्चकन्याहरुको हालत पनि अन्य वालिकाहरुको जस्तै थियो । जम्मा भएका आधा भन्दा बढीले चुरोट र चिलिम तानिरहेका थिए ।
अध्यक्षले तीन जना खैरे बिदेशी र एक जना नेपाली गाइड साथमा लिएर फुर्तिसाथ आई पुगे । अध्यक्षले ती पाहुनाहरुलाई सचित्र वोर्डतिर देखाउदै सगर्व भन्न थाले, हाम्रो गाउँ खूला दिशा मुक्त गाउँ हो । पर्यटकहरुले अध्यक्षको कुरा नबुझे पनि खुला रुपमा दिसा गर्न लागेको तस्वीरमा रातो मसिले क्रस चिन्ह लगाएको अर्थ बुझे ।
हाम्रो देशमा बिरालोले ट्याईलेट प्रयोग गर्दछन्, मानिसले प्रयोग गरेको के ठूलो कुरा भयो ? हाम्रो देशमा सयौं वर्ष पहिले भैसकेको कुरा के हेर्ने ?
धन्यवाद ! हामीहरु अर्कै ठाँउमा जान्छौं । गाउँमा धामी झाक्रीबाट झाक निकालि उपचार गराउने काइदा, महिलामा देवी चडेको दृश्य, सुगुरलाई झुण्डाएर नाक मात्र काटि दिनभरि तडपाई तडपाई वली दिई पूजा गर्ने दिन पनि भोलि नै परेको कुरा गरि अध्यक्षले पर्यटकहरुलाई रोक्न खोजे । दोभाषेले अध्यक्षको अनुरोधलाई उल्था गरि पर्यटकहरुलाई सुनाए ।
अन्धविश्वसपूर्ण धामी बसेको , देवता चडेकोअवैज्ञानिक ढोक र पशु अधिकार को विरुद्धको अमानवीय दृश्य नहेर्ने भन्दै तिनीहरुले आफ्नो बाटो तताए ।
वर्षको एकचोटी ढिडो पकाउने ताप्के माझने परंपरा पनि देखाउने मन थियो भन्दै अध्यक्षले आफ्ना सकर्मीतर्फ फर्केर मलीन अनुहार लगाए । त्यसपछि सबैले एक अर्कोको मुखमा हेराहेर गरे ।